Sida Si Toos Ah Loola Wadaago Qoraaladaada WordPress-ka LinkedIn Isticmaalka Zapier | Martech Zone
Mid ka mid ah qalabka aan ugu jeclahay cabbiraadda iyo daabacaadda quudintayda RSS ama qoraalkayga warbaahinta bulshada waa FeedPress. Nasiib darrose, barxaddu ma lahan is-dhexgalka LinkedIn, in kastoo. Waxaan u dhaqaaqay si aan u arko haddii ay ku darayaan waxayna siiyeen xal kale - ku daabacaadda LinkedIn via Zapier.
Zapier WordPress Plugin ee LinkedIn
Zapier waa u bilaash fara ku tiris iskudhaf ah iyo boqol dhacdo, marka waan isticmaali karaa xalkaan anigoon wax lacag ah dulsaarin… xitaa sifiican! Waa tan sida loo bilaabo:
Ku dar isticmaale WordPress ah - Waxaan kugula talin lahaa inaad isticmaale ku darto WordPress-ka Zapier oo aad dejiso erey sir ah. Sidan, uma baahnid inaad ka walwasho beddelashada lambarkaaga sirta ah.
Ku rakib Zapier WordPress Plugin - The Plugin Zapier WordPress waxay kuu ogolaaneysaa inaad dhexgaliso waxyaabaha aad ka koobantahay WordPress illaa tan adeegyo kala duwan ah. Ku dar username iyo lambarka sirta ah ee aad u dejisay Zapier.
Kudar WordPress-ka LinkedIn Zap - The Zapier LinkedIn Boggu wuxuu leeyahay tiro isku dhafan oo horeyba loo taxay… mid ka mid ah waa WordPress illaa Linkedin.
Zapier WordPress ilaa Template LinkedIn
Gal LinkedIn - waxaa lagu weydiin doonaa inaad gasho LinkedIn oo aad siiso rukhsad is-dhexgalka. Markaad sameyso, Zap-ku waa isku xiran yahay.
Daar Zap-gaaga - Awood u yeelo Zap-kaaga iyo marka xigta ee aad qoraal ku daabacdo WordPress, waxaa lagu wadaagi doonaa Linkedin! Hadda waxaad ku arki doontaa Zap-ka firfircoon Dashboard-kaaga 'Zapier'.
Oo halkaasaad tagtaa! Hadda, markaad ku daabacdo qoraalkaaga WordPress, waxaa si toos ah loogu daabici doonaa LinkedIn.
Oh… iyo hadda oo aan halkaas ku daabacayo, waxaa laga yaabaa inaad jeclaan lahayd inaad i raacdo LinkedIn!
Raac Douglas Karr on LinkedIn
Tags: quudiso LinkinLinkedIndaabacaadda ku xiranku daabac wordpress ku qoran Linkedinrss oo ku xiran linkedindaabacaadda warbaahinta bulshadaWordPressplugin WordPresswordpress ilaa linkedinwordpress ilaa linkedin zapzapierzapier plugin WordPress